NgoMsombuluko weCyber: ubuchwepheshe be5 abunakuphikwa ukuthi bungaphuthelwa - Techip RELAY
Accueil » I-TECH & ITELECOM »ICyber ​​ngoMsombuluko: ubuchwepheshe be-5 bunikezela ukuthi bungaphuthelwa
Imizuzu engu-4 edlule
Ngemuva kweNyanga eBlack Friday, iBlack Friday Week, iBlack Friday kanye neCyber ​​Monday Weekend, okuyinyanga kaNovemba eqambe kabusha ngokusemthethweni inyanga yezikhangiso enza umhlaba olawulwa yiCyber ​​ngoMsombuluko. Ithuba ngathi lokuncoma izipesheli ezimbalwa ezikufanele ngempela.
ICyber ​​Monday yakhelwe njengependant digital eBlack Friday, kugxile kakhulu eMelika ezitolo zenyama. Ngendaba yokuthuthuka kwempilo, ukusetshenziswa sekuguqukile kusuka esitolo kuya kuwebhusayithi futhi iBlack Friday manje njengoba, uma kungenjalo, ingumcimbi wedijithali kunomcimbi wokuthengisa ongokwenyama. EFrance, yi-ecommerçants abayingenisile. Kusukela lapho, ingabe i-cybermondaya isenencazelo? Hhayi-ke impela, kepha kuseyithuba lokuthi ubambe izinkontileka ezithile ezinhle ezisaqhubeka nokusebenza kuwebhu.
Njengalo lonke isonto, iNumerama inikeza ukukhethwa kwemikhiqizo emifushane, kepha konke kuyanconywa. Awekho amagajethi agcina kumakhabethe, akukho imikhiqizo enempilo yeshelufu elilinganiselwe, akukho ukukhushulwa okuyize.
I-SSD Samsung 1 To - 89 €
I-SSD yangaphakathi yalomthamo omkhulu, izohlala ilusizo ekucushweni kwe-PC, noma isitoreji ukwenza ama-backups. Siyathanda.
I-iPad Pro 11 intshi - 699 €
I-iPad Pro ihamba phambili ngamathebhulethi e-Apple, okwenza amaphilisi amahle kakhulu uwonke. Ngakho-ke kungukutshala imali okuhle ngokuhamba kwesikhathi, ngoba uhlobo lwaseMelika selujwayele ukulandela imikhiqizo yalo. Ifomethi ye-intshi ye-11 ilungele ithebhulethi ephathekayo - enkulu yona iba nzima uma ufuna ukuyenza ibe ukuphathwa kwemisipha noma isidlali semidiya esihambisanayo. Le yinguqulo yakamuva kakhulu, ene-ID ID.
Isikrini se-Gamer 24 esingu-Inch Curved Gamer - 189 €
Izikrini ze-Samsung QLED azibizi kakhulu kunalokho ezikunikezayo: iphaneli enhle egobekile ye-Full HD, isikhathi sokuphendula se-1 ms, ukuhambisana ne-AMD FreeSync, i-144 Hz indawo epholile ... Ngamafuphi, iyona isikrini esifanelekile somdlalo wevidiyo wokuncintisana ku-1080p, ongeke udinge ukucushwa kwe-PC okubiza kakhulu ukujabulela ubukhulu besikrini.
Iphakheji ye-Sosh 50 Go - 9,99 € ngenyanga
Leli iphakheji elihle kakhulu eFrance lapho liphromo. Inethiwekhi enhle kakhulu ye-Orange, izingcingo ezingenamkhawulo kanye ne-SMS, idatha ye-50 GB ku-4G ngenyanga, izulazula eYurophu ... ngamafuphi, inakho konke okungajabulisa. E-9,99 € ngenyanga, isikhathi sokusebenzisa. Futhi uma ufuna ukuxwayiswa inyanga ngaphambi kokuphela kwephromo ukuze uguqule i-opharetha futhi, UFrAndroid udale ithuluzi ngqo la.
I-Laptop Surface 3 - 899 €
I-Laptop Surface ilaptop ye-Microsoft eneziphetho eziyisibonelo. lokhu IMacBook kwiWindows sondela ukuphelela ngohlobo lwayo lwesithathu futhi uzokuthanda ukusebenza ngalo. Isilungiselelo esihle, esikhishwe muva nje, sokunyuswa kwale cyber ngoMsombuluko.
Ezinye izixhumanisi zalo mbhalo zixhumene: uma uthola injabulo yakho usibonga, sithola ikhomishini encane. Izixhumanisi ezihambisanayo ezihlokweni azinamthelela ekukhetheni kokuhlela kwe-Numerama yokuhlela ne-athikili ye-athikili. Sichaza konke lapha.
Lesi sihloko sivele kuqala https://www.numerama.com/tech/576597-lundi-cybernetique-les-5-offres-tech-a-ne-pas-manquer.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=576597
ICyber ​​ngoMsombuluko: I-PureVPN inikeza isaphulelo se-88%